कस्ता छन् विश्वका महँगा घर ? « News of Nepal
कस्ता छन् विश्वका महँगा घर ?
घर सबैको रहर हुन्छ, अधिकांश मानिसलाई घर आफूलाई सुरक्षित महशुस गराउने माध्यम हो भने कतिपय मानिसलाई आफ्नो वैभवता प्रस्तुत गर्ने माध्यम, जे होस् मानिसका सपनाका रूपमा रहेको घर विशेषगरी विश्वका महँगा घरप्रति धेरैको चासो हुने गरेको छ। त्यसैले विश्व चर्चामा आएका १० महँगा घरका बारेमा संक्षिप्त जानकारी।
बकिंघम प्यालेस, बेलायत
मूल्यः १ दशमलव ६ बिलियन डलर
७७ हजार वर्ग फिटमा फैलिएको बेलायती राजदरबारमा ७ सय ७५ कोठा रहेका छन्। तीमध्ये १९ स्टेट रुम, ५२ रोयलउन्ड गेस्ट रुम, १ सय ८८ स्टाफ रुम र ७८ बाथरुम हुन्। दरबारमा विश्व प्रसिद्ध बाल्कोनी पनि रहेको छ। बकिंघम दरबार बेलायती महारानीको लन्डन महल मात्र होइन। बकिंघम प्यालेसमा एडिन वर्गको शासक, योर्कको शासक, बेसेक्सका राजा–रानीको दरबार तथा बेलायती राजकुमार र राजकुमारीको निजी सचिवालय पनि रहेका छन्। विभिन्न प्रयोजनका लागि यस दरबारमा प्रत्येक वर्ष ५० हजार मानिस आउने गर्छन्।
मूल्यः १ बिलियन डलर
४० हजार वर्गफिटमा फैलिएको २७ तल्ले एन्टिलियाका मालिक भारतीय अर्बपति मुकेस अम्बानी हुन्। मुम्बईको अल्टामाउन्ट रोडमा रहेको एन्टिलिया संसारको सबैभन्दा महंँगो घरमध्ये एक हो। यस घरमा १ सय ६८ गाडी अटाउने ग्यारेज छ, एक बलरुम, ३ हेलिप्याड, बगैंचालगायतका फिचर छन्। एउटा मन्दिर, ५० जना अटाउने एक होम थिएटर, जिम सहितको अम्बानी निवासको छतमा स्विमिङ पुल रहेको छ।
अपर फिलिमोर गार्डेन्स, लन्डन
मूल्यः ९ सय ८० मिलियन डलर
पाँच तल्ले यस घरका मालिक युक्रेनी विजनेस वुमेन एलिका फ्रान्चकको हो। यसमा एक जिम, सोना तथा सिनामा थिएटर समेत रहेका छन्। पर्याप्त नेचुरल लाइट प्राप्त हुने यस घरका हरेक कोठा फराकिलो तथा अग्ला छन्। यस घरको एक तल्लामा उच्च सुविधा सहितका बेडरुम बनाइएका छन्। उक्त तल्लामा दुई बाथरुम तथा एक ड्रेसिङ रुम पनि छन्। अपर फिलिमोर गार्डेन्सको तेस्रो तल्लामा तीन बेडरुम तथा दुई बाथरुम उपलब्ध छन्।
मूल्यः ९ सय ४४ मिलियन डलर
एड्रा र टाइम ब्लिक्सेथ मालिक रहेको यो घर ५६ हजार वर्ग फुटमा फैलिएको छ। १ सय २३ कोठा रहेको यस स्केटिङ लज उच्च भेगमा रहेको छ। द पिनाकलको हरेक तल्लामा हिटिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। द पिनाकलमा विशाल वाइन कक्ष, जिम, सबै कोठामा आगो बाल्ने ठाउँ उपलब्ध, मसाज कोठा, इनडोर तथा आउटडोर पुल आदि फिचर रहेका छन्।
म्यान्सन डीएल एमिटी, फ्लोरिडा
मूल्यः ९ सय १३ मिलियन
पाम बीचमा रहेको म्यान्सन डीएल एमिटी फ्रेन्डसिप हाउसको रूपमा पनि परिचित छ। यस घरको पुरानो भर्सन एक रसियाली अर्बपतिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट सन् २००८ मा किनेका थिए। समुन्द्री किनारमा रहेको यस म्यान्सनमा ८० गाडी अटाउने ग्यारेज, ३१ मिटर लामो स्विमिङ पुल, बुलेट प्रुफ झ्याल, १८ बेडरुम, २२ बेडरुम, ३ पाउना कक्ष आदि रहेका छन्।
हाला रान्च एस्पेन, कोलोराडो
मूल्यः ८ सय २१ मिलियन डलर
५६ हजार वर्ग फिटमा फैलिएको यस घरको मूल्य ८ सय २१ मिलियन डलर रहेको छ। घरका मालिक जोन पलसन हुन्। सन् २००६ मा साउदी अरेबियन राजकुमार बान्दार बिन सुल्तानले बेचेको यस घरमा १५ बेडरुम, १६ बाथरुम, ग्यास पम्प तथा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ।
फ्लेउर डी लिस, लस एन्जेलस
मूल्यः ७ सय ६० मिलियन डलर
४५ सय वर्ग फिटमा फैलिएको फ्लेउर डी लिसका मलिक माइकल मिल्कन हुन्। सन् २००२ मा निर्मित १२ बेडरुम र १५ बाथरुम भएको यस घरमा ३ हजार वर्ग फिट ठूलो वाइन कक्ष, दुई तले पुस्तकालय, किचेनलगायतका कोठा रहेका छन्।
भिल्ला लिओपोल्डा कोट डिअजुरे, फ्रान्स
मूल्यः ४ सय ५७ मिलियन डलर
२९ सय वर्ग फिटमा फैलिएको भिल्ला लिओपोल्डा कोट डिअजुरेका मालिक रसियाली अर्बपति मिखेल प्रोखोरोभ हुन्। यसलाई संसारकै सर्वाधिक सुन्दर भिल्ला मानिन्छ। अगाडि निजी समुन्द्री किनार रहेको यस घरमा ११ बेडरुम, १४ बाथरुम, बगैंचा, स्विमिङ पुल आदि रहेका छन्।
एलिसन स्टेट, क्यालिफोर्निया
मूल्यः २ सय ६० मिलियन डलर
द ओराकलका संस्थापक ल्यारी एलिसनको २३ हेक्टरमा फैलिएको एलिसन स्टेटको मूल्य २ सय ६० मिलियनभन्दा माथि रहेको छ। रियल स्टेटका व्यवसायी तथा संकलक ल्यारीद्वारा निर्मित यस घर जापानी स्टाइलमा बनाइएको छ। यसमा १० भवन, एक मानव निर्मित ताल, बाथ हाउस र सानो तलाउ समेत रहेको छन्।
बेल एअर स्पेक म्यानोर, लस एन्जलस
मूल्यः २ सय ५० मिलियन डलर
४५ हजार वर्ग फूटको आधारमा निर्मित बेल एअर स्पेक म्यानोरका मालिक ब्रुस माकोस्की हुन्। म्यानोरमा १२ बेडरुम, २१ बाथरुम, तीन किचेन, मसाज, स्पा तथा फिटनेस सेन्टर, वाइन कक्ष, होम थिएटर तथा ८५ फिट इन्फिनिटी स्विमिङ पुल रहेका छन्।